CAYNTE: Farmaajo wuxuu toddobaad gudihiis ku dhacay bohoshii ugu weyneyd - Caasimada Online
Home Warar CAYNTE: Farmaajo wuxuu toddobaad gudihiis ku dhacay bohoshii ugu weyneyd
CAYNTE: Farmaajo wuxuu toddobaad gudihiis ku dhacay bohoshii ugu weyneyd
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu toddobaadkan ku dhacay bohoshii ugu weynd, sida uu hadalka u dhigay.
“Laba wadiiqo oo kala daran ayaa u furan: 1. Inuu kusii socdo dhabbaha qar iska xoornimada, sheegtana inuu yahay madaxweyne sharci ah. Taas waxaa ka dhalan doonta in isaga iyo xertiisa toos loo beegsado, cunaqabateyn iyo curyaamin kale la dul dhigo. 2. Inuu is-casilo, kaddib marka uu garowsado tabar darradiisa. Ku soco ayaan leeyahay.”